Talismans Vagadziri & Vatengesi - China Talismans Factory
rombo rakanaka amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Rombo bhegi Amulet 512508
Kupisa-kutengesa Talisman yerunyararo (Maropafadzo mairi) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - yakaitwa-matatu emhando yekumonera, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
rombo rakanaka amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Rombo bhegi Amulet 512509
Kupisa-kutengesa Talisman yerunyararo (Ruviri mufaro) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - yakaitwa matatu-mativi emucheka, rega ruoko riite kuratidza ako manzwiro. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
rombo rakanaka amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Rombo bhegi Amulet 512530
Kupisa-kutengesa Omamori (Mwari komborera) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa katatu-mativi emucheka, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
rombo rakanaka amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Rombo bhegi Amulet 512531
rombo rakanaka amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Rombo bhegi Amulet 512532
Kupisa-kutengesa Omamori (dhadha) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa-mativi matatu ekushongedza, rega ruoko riite kuratidza ako manzwiro. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
rombo rakanaka amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Rombo bhegi Amulet 512533
Kupisa-kutengesa Omamori (Iva dhadha rakanaka) Shinda Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - yakagadzirwa-matatu emhando yekushongedza, rega ruoko riite kuratidza ako manzwiro. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
rombo rakanaka amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Rombo bhegi Amulet 512536
Kupisa-kutengesa Omamori (parvenu) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa katatu-mativi emucheka, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
rombo rakanaka amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Rombo bhegi Amulet 512535
Kupisa-kutengesa Omamori (Usadye mafuta) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - yakagadzirwa katatu-yakasarudzika machira, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
rombo rakanaka amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Rombo bhegi Amulet 512560
Kupisa-kutengesa Omamori (Chengetedzo) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa-mativi matatu ekushongedza, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.
rombo rakanaka amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Rombo bhegi Amulet 512561
Kupisa-kutengesa Omamori (Anokuda iwe) Thread Yakarukwa Diy Embroidery Kit shandisa ruoko - rakagadzirwa katatu-mativi emucheka, rega ruoko rugadzire kuratidza zvaunonzwa. Micheka yemhando yepamusoro, kududzira kwepamusoro, kugadzirwa kuri nyore.